रगत अभाव हुन नदिन सक्दो पहल गर्छु : प्रचण्ड - Everest Dainik - News from Nepal
रगत अभाव हुन नदिन सक्दो पहल गर्छु : प्रचण्ड
रगतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ - डा. कोइराला
काठमाडौं, वैशाख १७ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा रगत अभाव हुन नदिन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सोमबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले रक्त संकलन अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन सबै स्थानीय तहसम्म आवश्यक संरचना तयार पार्ने बताए । साथै त्यसका लागि आफ्नो योजना सुनाए ।
याे पनि पढ्नुस दोस्रो हेटौंडा जर्नालिज्म अवार्डबाट ६ जना सम्मानित
प्रचण्डले आम जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पनि आवश्यक विमर्श गरिरहेको बताए । साथै प्रचण्डले रगत संकलन अभियानलाई निरन्तर रुपमा सक्रिय रहेकोमा स्वयमसेवी रक्तदाताहरुको खुलेर प्रशंशा गरे ।
प्रचण्डले जनताले शान्ति, समृद्धि र सुश्वास्थ्यको चाहना राखेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्न मुलुकमा जागरण अभियाननै संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले रगतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संकलन गरिएको रगत समयमा पाउन नसक्दा मानिसहरुको ज्यान जान गरेको पनि स्मरण गराए ।
वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ कोइरालाले हरेक समयमा रगत उपलब्ध हुनेगरी संकलनको कामलाई अघि बढाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।
याे पनि पढ्नुस ‘प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ’
रगत अभावकै कारण नेपालमा धेरैको मानिसको ज्यान जाने गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ट्याग्स: Blood, Kathmandu, prachanda